အသစ်ထွက်ရှိလာမယ့် OnePlus 8 စီးရီးမှာ ဘာတွေထူးခြားလာမလဲ? - PX
OnePlus အနေနဲ့ ၂၀၂၀ မှာ မိတ်ဆက်နေကျ မော်ဒယ်တွေနဲ့မတူဘဲ Affordable ဖြစ်လာမယ့် Lite စမတ်ဖုန်းကိုပါ ထုတ်ပြလာမယ်လို့ သိထားရပါတယ်။ ဒါဟာ Galaxy S20 စီးရီးနဲ့ Samsung မိတ်ဆက်ပြီးသား S10 Lite ၊ Note10 Lite တို့နဲ့ ယှဥ်သွားမယ်လို့ ယူဆရပြီး OnePlus 8 စီးရီးနဲ့ သိထားရသမျှတွေကို စုစည်းဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
OnePlus ဟာ သူတို့ရဲ့ မကြာခင်မှာထွက်ရှိလာတော့မယ့် Products တွေရဲ့ အချက်အလက်တွေကို ထိန်းထားရာမှာ တော်တော်လေး ချက်ချာတယ်လို့ဆိုရမှာပါ။ အကြောင်းကတော့ မကြာခင်ထွက်ရှိလာမယ့်ဖုန်းဟာ OnePlus 8 series ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို အခုထိ အတည်ပြုထားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။
Image Credit: Anrdoid Headlines
ဒါပေမယ်လည်း ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ ထုံစံနာမည်ပေးပုံစံအတိုင်း ဖုန်းတွေကို နာမည်ပေးလာဖို့ရှိ‌နေပါတယ်။ အဲ့အတွက် မကြာခင်ထွက်ရှိလာမယ့်ဖုန်းတွေဟာ OnePlus 8 နဲ့ OnePlus 8 Pro ဖြစ်လာဖို့ သေချာပါတယ်။
OnePlus 8 Lite ကတော့ Wild Card တစ်ခုထက်ပိုပါတယ်။ “Lite” ဆိုတဲ့ နာမည်ဟာ သင့်တင့်တဲ့သဘောရှိတယ်။ အရင်တုန်းက OnePlus X နာမည်နဲ့ Budget ဖုန်းထုတ်ခဲ့ဖူးတယ်။ အဲ့အတွက် OnePlus 8 Lite ဟာလည်း မတူတဲ့ နာမည်ရှိလာနိုင်တယ်လို့ ခန့်မှန်းရပါတယ်၊ ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ ဥပမာ OnePlus X2နဲ့လည်း မိတ်ဆက်လာနိုင်ပါတယ် (ဒါကတော့ ဖြစ်နိုင်ချေနည်းပါတယ်)
Release Date အနေနဲ့ကတော့ ၂၀၂၀ မေလလောက်မှာ တွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ အရင်က OnePlus7နဲ့ OnePlus6တို့ဟာ မေ လထဲမှာ အတူတူထွက်လာခဲ့ပြီး OnePlus5ကတော့ ဇွန်လမှသာ ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတာက OnePlus 8 ဟာ အစောဆုံး April 2020 မှာထွက်လာဖို့ရှိနေပြီး ၂၀၂၀ တတိယသုံးလပတ်မှာ OnePlus 8T ကို တွေ့ရနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ OnePlus 8 Series နဲ့ပတ်သက်ပြီး ပေါက်ကြားခဲ့တဲ့ Renders တွေကို တွေ့ခဲ့ပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇိုင်းတွေဟာ @OnLeaks နဲ့ 91Mobiles ကနေ ထွက်ရှိလာတာပဲဖြစ်ပြီး Renders တွေအရ OnePlus 8 ၊ OnePlus 8 Pro ၊ OnePlus 8 Lite တို့ ဘယ်လိုပုံစံရှိလာမလဲဆိုတာ သေချာသလောက်ရှိနေပြီလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။
OnePlus 8 ကတော့ OnePlus7နဲ့ သိပ်တော့ပုံစံမတူပါဘူး။ OnePlus 8 ရဲ့ ကျောဘက် Camera Setup ဟာ အလည်မှာ ထောင့်မှန်ပုံစံထည့်ထားပြီး Lens တစ်ခုအပိုထပ်ထည့်ပေးထားပါတယ်။
ဖုန်းရဲ့ရှေ့ဘက်မှာတော့ Waterdrop-notch မပါတော့ဘဲ Selfie Camera တစ်လုံးအတွက် Punch-hole ကို Display ရဲ့ အပေါ်ဘက် ဘယ်ဘက်ထောင့်မှာတွေ့ရမှာပါ။
Volume ခလုတ်နဲ့ ပါဝါခလုတ်ကို ဖုန်းရဲ့ ညာဘက်မှာတွေနိုင်ပြီး ‌ဖုန်းရဲ့အောက်ခြေမှာတော့ USB-C Port ကိုတွေ့ရမှာပါ။ 3.5mm Headphone Jack တော့ မပါတော့ပါဘူး။
OnePlus 8 Pro ရဲ့ နောက်ဘက်ကတော့ OnePlus 7T Pro နဲ့တော့ အရမ်းကြီးကွဲမနေပါဘူး။ ဖုန်းရဲ့ ToF Sensor ဟာ Camera Layout ရဲ့ ဘယ်ဘက်အလယ်မှာထည့်ထားတဲ့ပုံစံဟာ 7T Pro နဲ့တူနေပါတယ်။ OnePlus 8 Pro မှာတော့ ၂၀၁၉ ဒီဇိုင်းနဲ့ လုံးဝခွဲထုတ်လိုက်ပြီး Punch-hole Display ကိုပဲသုံးပေးထားပါတယ်။
တစ်ချို့သူတွေအနေနဲ့7Pro နဲ့ 7T Pro တို့ဟာ Full-screen Display ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက် ဘာလို့ Punch-hole သုံးတာလဲ။ Counter-part စမတ်ဖုန်းတွေဖြစ်တဲ့ Galaxy S20 ၊ HUAWEI P40 စီးရီးတွေမှာလည်း Punch-hole နဲ့ပဲ မြင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် တမင်ပြောင်းသုံးတာလား?
ဖြစ်နိုင်တဲ့ အကြောင်းပြချက်တစ်ခုက OnePlus 8 Pro ဟာ ပထမဆုံး IP-certified ဖြစ်တဲ့ ဖုန်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ Pop-up camera ပါတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးအတွက် IP Rating ရဖို့ခက်ခဲတာမလို့ OnePlus ဟာ All-Screen Display ကို စွန့်လွတ်လိုက်တဲ့ပုံရှိပါတယ် (Could be or perhaps)
Leaked Renders တွေအရ OnePlus 8 Lite ဟာ တစ်ခြား OnePlus ဖုန်းတွေနဲ့ မတူပါဘူး။ ဖုန်းရဲ့ Camera Setup ဟာ OnePlue မော်ဒယ်တွေနဲ့ မတူတာကိုလည်း မြင်ရလာနိုင်ပါတယ်။
ဖုန်းဟာ ဈေးသိပ်မကြီးလာနိုင်တဲ့အတွက် ဖုန်းမှာ Curved Display ထက် Flat display ကိုပဲသုံးပေးထားပါတယ်။ ကင်မရာ သုံးလုံး၊ လေးလုံးအစား ကင်မရာနှစ်လုံးကိုပဲသုံးလာဖို့ရှိ‌နေပြီး ပိုကြီးတဲ့ Bezels တွေ ပါလာဖို့ရှိနေပါတယ်။ Lite ဖြစ်ပေမယ့် Headphone Jack Port ကို ဖြုတ်ထားဆဲပါ။
OnePlus အနေနဲ့ OnePlus 8 series နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Specs တစ်ချို့ကို အနည်းငယ်အတည်ပြုထားပါတယ်။ ထိုအတည်ပြုချက်တွေကို ပထဆုံးဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပြီး ခန့်မှန်း Specifications တွေကိုတော့ နောက်မှဖော်ပြ‌ပေးထားပါ့မယ်။
CES 2020 တုန်းက OnePlus ဟာ OnePlus 8 series မှာ 120Hz Refresh Rate ပါ၀င်လာမယ်လို့ အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။
OnePlus 8 Lite မှာ High Refresh Rate မပါလာနိုင်ပါဘူး။ အရင်က OnePlus ဖုန်းတိုင်းမှာ 90Hz Refresh Rate ပါမယ်လို့ ကတိပေးခဲ့တဲ့အတွက် OnePlus 8 Lite မှာပုံမှန် 60Hz ထက်မြင့်တဲ့ Refresh Rate ပါ၀င်လာနိုင်ပါတယ်။
Leaked တွေအရ OnePlus 8 မှာ MEMC chip ကို ထောက်ပံ့မယ်လို့ သိရပါတယ်။ MEMC ဆိုတာ Motion Estimation and Motion Compensation ဖြစ်ပြီး ရုပ်မြင်သံကြားတွေမှာ အသုံးပြုတဲ့ နည်းပညာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ထပ် OnePlus ရဲ့ 120Hz Display ဟာ Touch Sample Rate 240Hz ရှိပါတယ်။ အဲ့တာကို OnePlue က Smooth Chain Technology နဲ့ ပိုကောင်းအောင်ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။
OnePlus 8 နဲ့ OnePlus 8 Pro တို့မှာ Qualcomm ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ Snapdragon 865 Chipset ပါလာဖို့ရှိနေပါတယ်။ Snapdragon 865 နဲ့အတူ 5G-ready အသင့်ရလာဖို့ရှိနေပါတယ်။ အကြောင်းက 865 မှာ 5G modem ပါလို့ပါ။
Camera ပိုင်းမှာတော့ OnePlus 8 Pro မှာ Samsung ရဲ့ 108MP sensor အသစ်ပါလာဖို့ရှိနေပါတယ်။ 2020 Flagship ဖုန်းတော်တော်များများမှာ 108MP Sensor ကိုစံအနေနဲ့ သုံးလာဖို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။ Pro Version မှာ 108 MP ပါလာခဲ့ရင် OnePlus 8 မှာတော့ 48MP or 64MP sensor တို့ကိုသုံးလာနိုင်ပါတယ်။
နောက်ထပ် OnePlus ဟာ 8 Series မှာ Wireless Charging ကိုထောက်ပံ့ပေးလာနိုင်ပါတယ်။ အဲ့သတင်းသာမှန်ခဲ့ရင် Wireless Charging ဟာ 8 နဲ့ 8 Pro မှာသာပါလာဖို့ရှိနေပြီး 8 Lite မှာတော့ မပါလာနိုင်ပါဘူး။
OnePlus 8 Lite အတွက်ကတော့ လောလောဆယ်မှာ ဘာမှမသိရသေးပါဘူး။ သူ့မှာ Snapdragon 865 အစား Snapdragon 700 ဒါမှမဟုတ် 600 series သုံးလာဖို့ရှိနေပြီး 6GB/128GB memory ထက်နည်းတဲ့ Version တွေလည်းရှိလာနိုင်ပါတယ်။ အခုသတင်းဟာ အတည်ပြုထားခြင်းမရှိသေးတဲ့အတွက် မှန်နိုင်ခြေမရှိ‌ပါဘူး။
Renders တွေမှာ ဖုန်း‌တွေရဲ့ Fingerprint Scanner ပါတာကို မတွေ့ရပါဘူး။ အဲ့အတွက် 8 series မှာ Optical in-display Fingerprint Sensors တွေ့လာရနိုင်ပါတယ်။
Leak အရ OnePlus 8 8 GB RAM + 128 GB storage ၊ 8 GB RAM + 256 GB storage နဲ့ 12 GB RAM + 256 GB storage တို့ဟာ တရုတ်ယွမ် ၃၆၉၉ (မြန်မာငွေ ၈ သိန်း၀န်းကျင် )၊ တရုတ်ယွမ် ၃၉၉၉ (မြန်မာငွေ ၈ သိန်းခွဲ ကျော်) နဲ့ တရုတ်ယွမ် ၄၂၉၉ (မြန်မာငွေ ၉ သိန်း ကျော်) အသီးသီးရှိလာမှာပါ။
OnePlus 8 Pro ကတော့ OnePlus 8 ရဲ့ Storage ပုံစံလိုလာဖို့ရှိနေပြီး ဈေးကတော့ တရုတ်ယွမ် ၄၉၉၉ (မြန်မာငွေ ၁၀ သိန်းကျော်) ၊ တရုတ်ယွမ် ၅၄၉၉ (မြန်မာငွေ ၁၂ သိန်း၀န်းကျင်) နဲ့ တရုတ်ယွမ် ၅၉၉၉ (မြန်မာငွေ ၁၃ သိန်း ၀န်းကျင်) ဆိုပြီး အသီးသီးရှိလာမှာပါ။
OnePlus 8 Lite ကတော့ မြန်မာငွေ ၆ သိန်းခွဲ ၀န်းကျင် လောက်ရှိလာနိုင်ပါတယ်။